IiNkcazo zeeNkcazo zeeNombolo
Kwimanani, i-qualitative data-ngamanye amaxesha ebizwa ngokuba yimpembelelo yedatha-yidata enokuthi ilungiselelwe kwiindidi ngokusekelwe kwiimpawu zenyama, ubulili, imibala okanye nayiphi na into engenayo inxulumene nayo.
Imibala yeenwele zabadlali kwiqela lebhola lebhola, umbala weemoto kwindawo yokupaka, amanani amabhalana abafundi eklasini, iintlobo zeemali kwi-jar, kunye nemeko yamacandi kwiipakethe ezahlukeneyo yonke imimiselo yokufaneleka kwedatha ixesha elide njengoko inani elithile lingabelwe kuyo nayiphi na le nkcazo.
Idatha efanelekileyo ifaniswe nedatha eninzi apho iiseti zeenkcukacha eziseleyo zinamanani anxulumene nabo abavavanya ubuninzi bezinto okanye izinto ezineempawu ezabelwana ngazo. Ixesha elininzi, idatha eninzi isetyenziselwa ukuhlalutya iiseti zeenkcukacha ezifanelekileyo .
I-Qualitative Versus Quantitative Data
Kulula kakhulu ukuqonda umahluko phakathi kwedatha kunye neyomnatha: idatha yangaphambili ayibandakanyi iinombolo kwenkcazo yayo yezinto okanye iqela lezinto ngeli xesha elilandelayo. Sekunjalo, kunokudideka xa ucinga ngokwemiqathango yamanani, okubandakanya ubungakanani kunye nobukhulu, obuninzi nolwazi olungagqibekanga.
Ukuze ukwazi ukuqonda kangcono ezi ngcamango, kukulungele ukugcina imizekelo yeetekethi ezithile zeenkcukacha kunye nendlela anokuchazwa ngayo. Qaphela ukuba yiyiphi imilinganiselo kunye neenkcukacha ezithintekayo kule mizekelo elandelayo:
Iikati zinobumba obomvu, obumdaka, obumnyama, okanye obumhlophe (ubunjani).
Amakhwenkwe anombala omnyama, omnyama, obomvu, obomvu, obomvu (ubunjani).
Kukho amagumbi omnyama omnyama kunye neekati zantlanu ze-orange (ubuninzi).
Ikhekhe laliyi-50 lekhoshokolethi kunye ne-vanilla ye-50 ye-vanilla (ubuninzi).
Nangona xa uphawu oluthile okanye uphawu lwezinto lufanelekile, njengetshokolethi yekhekhe okanye emnyama kwiikati, ukufakwa kwenani kwisetyenzisi sedatha kwenza kubekho ubuninzi, nangona oku kubaluleka kubalulekile ukufundwa kwamanani njengoko kunika iiklasi apho izibalo zikwazi ukuthelekisa ngamanani.
Ubaluleka beDatha eQinisekayo
Nangona idatha yokweluleka ibalulekile ekuqaliseni ubukhulu becala beempawu okanye iimpawu, ubungakanani kunye nobukhulu bezinto, kunye nolwazi olunxulumene nesihloko esinikeziwe, idatha efanelekileyo njengombala weenwele okanye isikhumba sabasebenzi kwinkampani okanye impilo Ingubo yenkomo ingaba ibalulekileyo ekuhlalutweni kwamanani, ngakumbi xa idibene nenani elincinci malunga nale micimbi yekhwalithi.
Okubalulekileyo, i-qualitative data ibalulekile kuba ivumela abalingisi ukuba baqulunqe iiparameter apho kugcinwa iiseti ezinkulu zeenkcukacha. Ngokomzekelo, inkampani efuna ukucacisa ukuhlukahluka kwabasebenzi bayo ifuna ukujonga iqoqo leenkcukacha zobunjani njengohlanga kunye nobuhlanga babasebenzi balo kwakunye nolwazi oluninzi lwamaxesha abasebenzi ababa nawo kwiintlanga kunye nohlanga.
Idatha efanelekileyo inikeza iindlela ababukeli abanokuzilinganisa ngayo ihlabathi elikuzungezile-kukho i-blondes ezintathu, amabhinqa amabini, kunye nabesifazane abathathu abanobomi abamnyama etafileni okanye kukho abantu aba-16 abatsha kunye nabangama-15 abama-sophomores abaya kwi-band band.
Imfazwe ye-1812: USS Chesapeake
Abafazi baseNdiya Captivity Narratives